यी दुई खाना एकसाथ खाँदा ज्यानै जान सक्छ, थाहा पाइराख्नुस् ! - News20 Media
March 10, 2020 March 10, 2020 N20LeaveaComment on यी दुई खाना एकसाथ खाँदा ज्यानै जान सक्छ, थाहा पाइराख्नुस् !
एजेन्सी : स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौ । त्यसैले आजकाल हामी खाना प्रति निकै सचेत हुने गर्दछौ । हामीले खाने खानाका विषयमा सचेत हुनु जरूरी पनि छ । हामीले खाने कुनै-कुनै खाना साथमा खाँदा हामीलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुन्छ । हामीले खाने कुनै खानासँगै खाँदा त्यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने गर्छ । आज यहाँ यस्ता खानाका बारेमा जानकारी दिँदैछौ, जुन खानाहरू एकै साथमा खाँदा त्यसले फाइदा होइन बेफाइदा गर्छः– कोल्डड्रिङ्क्स पिएपछी पानमसला खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रत्येक नेपालीलाई निशुल्क हुनुपर्छ : सांसद ढकाल